Iingcali kunye neenjineli - Shijiazhuang damei kingmech pump Co., Ltd.
Igama: Ingoma kaDavid
Indawo: Ingcali yeeMpompo zeKhemikhali
Intshayelelo: Ufundile ngomatshini omkhulu wamanzi kwiYunivesithi yaseGansu kwiDyunivesithi ukusukela ngo-1990 ukuya ku-1994. Wayesebenza kwisebe loyilo lwempompo eDalian Acid Pump Works ukusukela ngo-1994 ukuya ku-1997. Wayesebenza kumasebe ayila iimpompo eDalian Sulzer ukusukela ngo-1997 ukuya ku-2000. ukususela ngo-2000 ukuya ku-2004 wasebenza API 610 pump injineli ophezulu e Shijiazhuang Damei Kingmech ukususela ngo-2005.
Uncedo: Impompo ye-API 610, ngakumbi iimpompo ze-VS4 & VS 5; Impompo kazibuthe
Indawo: Ingcali yePump ye-API610
Intshayelelo: Waphakama kumatshini we-hydraulic kwiYunivesithi yaseJiangsu yeSayensi kunye neTekhnoloji ukusuka ngo-1989 ukuya ku-1993.
Wayesebenza kwisebe loyilo lwe-API610 e-Shenyang Pump Works ukusuka ngo-1993 ukuya ku-1997. Wayesebenza njengomlawuli kwisebe loyilo lwempompo ye-API610 e-Shenyang Pump Works ukususela ngo-1997 ukuya ku-2004. Wayesebenza njenge-API610 kwinjineli enkulu yaseShijiazhuang Damei Kingmech ukusukela ngo-2005.
Uncedo: Impompo ye-API 610, ngakumbi impompo ye-BB4 kunye nempompo ye-BB5; Impompo yesityalo esinamandla
Indawo: Impompo oluludaka ingcali
Intshayelelo: Waduma kumatshini wokubonisa ngesanti kubunzulu baphantsi kwiYunivesithi yaseGansu kwiDyunivesithi ukusukela ngo-1990 ukuya kowe-1994. Wayesebenza kwisebe loyilo lwempompo eShijiazhuang Pump esebenza ngo-1994 ukuya ku-1997 wasebenza kwiSebe lokuThumela nokuThumela ngaphandle eShijiazhuang Pump Industry Group ukususela ngo-1997 ukuya ku-2006. UDamei Kingmech ukusukela ngo-2006.
Uncedo: IsiNgesi, itekhnoloji ye-Pump kubandakanya ukhetho lwempompo, inkonzo, ulawulo lomgangatho njl.
Indawo: Oluludaka Pump Isicelo Injineli
Intshayelelo: Waye wahlutha kwiLuoyang Institute of Science and Technology, eyintloko kukuyilwa komngundo Ukusukela ngo-2008 ukuya ku-2010, wasebenza njengendoda yobuchwephesha yenkqubo yoyilo eLuoyang Mold Manufacturing Co., Ltd. Ukususela ngo-2010, wazibandakanya neDamei Kingmech Pump Co., Ltd njengenjineli ejongene nenkonzo yezobugcisa yempompo oluludaka.
Uncedo: Itekhnoloji yokumpompa oluludaka ifakela uyilo lolwakhiwo, inkxaso yetekhnoloji kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa.
Indawo: Impompo yemichiza / i-API610 injineli yesicelo sempompo
Intshayelelo: Ubalasele kuyilo loomatshini, ukuvelisa kunye nokuzenzekelayo kwiXingtai Institute of Industry Munitions ukusuka ngo-2004 ukuya ku-2007 kwaye wafunda ngakumbi kwiYunivesithi yase-Hebei yobunjineli ngo-2010 Ulungile ekusebenziseni isoftware yokukhetha uhlobo lwePump, i-AutoCAD-CAXA njalo njalo. Ukusuka kwi-2006 ukuya kwi-2014, wasebenza kuyilo, kwimveliso, kwinkxaso yetekhnoloji yempompo yesantya esikhethekileyo kunye nempompo ye-API yemichiza eBeijing Special Pump Co, Ltd. Ukususela ngo-2014, wajoyina iShijiazhuang Damei Kingmech Pump Co., Ltd ephethe inkonzo yezobugcisa. yeempompo ze-API 610.
Uncedo: Ukukhethwa kwemodeli, uyilo, inkxaso yezobugcisa kwimpompo ye-API 610 kunye nempompo ekhethekileyo yesantya esiphezulu.
Intshayelelo: Waphumelela kwiDyunivesithi yase-Hebei yesayensi kunye netekhnoloji yoyilo olukhulu kunye nokwenza imveliso ngo-2010 ukuya ku-2014. Emva kokuthweswa isidanga wajoyina iShijiazhuang Pump Co, Ltd njengesikhundla sobunjineli. Nguye ophethe inkonzo yezobuchwephesha kubaxumi iimpompo ezifunekayo. Unobuchule bokwenza i-2 D kunye ne-3 D imizobo ngokusebenzisa isoftware ye-Auto CAD, Pro / E njalo njalo kwaye ulunge kakhulu ekuhloleni iinxalenye kwaye aguqulele kwimodeli ye-3D..Kusukela ngo-2017, wajoyina iShijiazhuang Damei IKingmech Pump Co, Ltd ejongene nenkonzo yezobuchwephesha yeempompo oluludaka.